Apple wuxuu xaddiday 16 AirTags ah oo lala xiriirin karo Apple ID kasta Wararka IPhone
Apple wuxuu xaddidayaa 16 AirTags oo ku xirnaan kara aqoonsi kasta oo Apple ah
Angel Gonzalez | 23/04/2021 14:00 | Noticias, Alaabada Apple
Mid ka mid ah waxyaabaha xiddigga La soo saaray Talaadadii la soo dhaafay waxay ahayd AirTag, oo ah astaamaha dhul-goosadka ee Big Apple. Badeecad xan badan ka dambeysa gadaalna ugu dambeyntii u aragta iftiinka qiimo dhan 35 euro cutubkiiba. Qalabka wuxuu adeegsadaa shabakadda Raadinta loo abuuray si iskaashi leh dhammaan aaladaha Apple ee la geeyay adduunka oo dhan. Mid ka mid ah wareysiyadii ugu dambeeyay, madaxweyne ku-xigeenka Apple ee suuq-geynta wax soo saarka, Kaiann Drance, ayaa sidaas ku sheegay waxaa jira xaddiga 16 AirTags oo ay hawlgelisay ID Apple. Intaa waxaa dheer, waxay hubisay in sheyga aan loogu talagalin inuu la socdo carruurta ama xayawaanka rabaayadda ah.
Ugu badnaan 16 AirTags halkii aqoonsi Apple ah, xadka ay ku soo rogtay Cupertino
El wareysi Rene Ritchie, oo lagu yaqaan Youtube, ayaa la kulmay Kaiann Drance, Madaxweyne ku xigeenka Apple ee suuq geynta wax soo saarka. Wareysiga oo dhan waxay kaga hadlayeen sii deynta cusub ee Apple. Intaa waxaa dheer, waa la bixiyay macluumaad aan ilaa hada la aqoon adeegsadayaal badan, iyadoo la tixgelinayo in macluumaadka taageerada ee laga heli karo websaydhka Apple ay wali xoogaa yar yihiin.
Si kastaba ha noqotee, Drance waxay ku dhawaaqday laba dhinac oo muhiim ah oo ku saabsan AirTags. Waxaa la xaqiijiyay inay jirto xadidaad u hawlgalin aqoonsi kasta oo Apple ah. Xadkaani wuxuu ku yaal 16 AirTag halkii isticmaale. Taasi waa, isticmaale kasta wuxuu kicin karaa ugu badnaan 16 qalab oo haddii, haddii lagu iibsado xirmooyin 4 ah, qiimahooda guud uu gaarayo 476 euro.
Mid ka mid ah ogeysiisyada ayaa lala xiriiriyay suurtagalnimada in lala wadaago goobta agabkan qalabka qoyska intiisa kale iyada oo loo marayo Wadaagista Qoyska. Tani waxay u oggolaaneysaa nalka goobta soo ogow iphone-yada ay leeyihiin qoyska iskana ilaali inaad shiddo Habka lumay markaad la xiriirayso qalab ka duwan kan aad dhaqaajisay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple wuxuu xaddidayaa 16 AirTags oo ku xirnaan kara aqoonsi kasta oo Apple ah
AirTags hadda waa lagu keydin karaa Apple, sida midabka madow ee iPhone 12
Waxaan haynaa Siri Remote cusub laakiin aan lahayn xawaare dheereeye iyo gyroscope la'aan ciyaaraha